Robocalls- Anyị agaghị echefu ha! | Martech Zone
Anyị niile na-enweta ha, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ụwa niile kpọrọ ha asị, oku na-akpasu iwe na-akwalite ụfọdụ ngwaahịa ma ọ bụ ihe omume na-egwu egwu ma ọ bụ, nke ka njọ, na-agwa gị okwu n'olu igwe. Ọ dị mma, FTC etinyela iwu na ụkpụrụ ọhụụ gbasara itinye oku ndị a.
Jon Leibowitz, Onye isi oche nke FTC, nwere okwu ọjọọ mara mma n'okwu a.
Ndị ahịa America emeela ka o doo anya na ihe ole na ole na-akpasu ha iwe karịa ọtụtụ ijeri robocalls azụmahịa ha na-enweta kwa afọ.
Malite na Septemba 1, ogbunigwe a nke ụzọ ndị enyere iwu, arịrịọ na-enweghị isi, na ahịa nwere obi ọjọọ ga-abụ iwu na-akwadoghị. Ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa chere na ndị robokal na-akpagbu ha, ha kwesịrị ịgwa anyị, anyị ga-agbaso ha.
Nke a dị ka iwu kacha sie ike taa maka ụdị azụmaahịa a, mana enwere ụfọdụ nnabata ndị na-enye ụfọdụ ndị otu ohere ka ha gaa n'ihu na-eji teknụzụ a. Imirikiti ndị ahụ metụtara ozi ozi na ozi nkwado.
Isi okwu a bụ ma ọ bụrụ na ị na-akpọ ịsị na a kagburu obere egwuregwu bọọlụ Johnny nke ahụ dị mma, mana ọ bụrụ na ị na-akpọ ka ị gwa m maka onyinye ọhụrụ ọhụụ ị nwere, ị nwere ike nọrọ na nsogbu maka ụda nke $ 16k kwa oku belụsọ ma ị nwetere m nkwupute nkwupute m. Nke a nwere ike ịgbakwunye otu nnukwu mma dị ngwa ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-eji ụdị teknụzụ mgbasa ozi a.
Lelee ọkwa FTC inye na nyocha, ma ọ bụ lelee iwu ikpeazụ pdf.
Tags: akpaghị aka okuftcoku ekwentịrobocallstelemarketing
Salesforce Integrated msdị na Formstack
Kedu ihe dị njọ na kaadi azụmaahịa gị?